Kwisitayile seFashoni 2020, Abakhuthazi befashoni ye-Instagram Qhubeka nokuKhokela
AUbomi buye buhle buye kwimeko yesiqhelo, abantu abadumileyo kunye neenkcubeko zesitayile kulo lonke laseAfrika- nababekhona bezona zibalaseleyoAbaphembeleli befashoni ye-stagram-- bafumana izizathu ezingakumbi zokunxiba, baphume benze ingxelo yefashoni phambi kokuba kukhule ixesha lokukhumbula naphi na apho bakhoyo. kwisitayile sefashoni i-Instagram
Abantu abadumileyo base-Afrika kunye nabaphembeleli bemfashini basebenzisa indlela yabo ukungqina ukuba ubhubhane wehlabathi awunakulinganiswa nesiphelo sokwenza izinto esizithandayo- ngakumbi ukuba iyasigcina sihamba. Nokuba siqhubeka sishumayela ivangeli yokhuseleko kwaye sicela ukuba ugcine imithetho yodidi lwasentlalweni, sikwaphinda sifuna ukugxininisa into yokuba isinxibo esinefashoni akufuneki sikwenze ubonakale ulungile ngaphandle kodwa kukwenze ube nokuzithemba okuvela ngaphakathi ngaphandle. Oko kuzithemba kuko kanye esinokuziva kubafazi kolu luhlu.
Kule veki iphelileyo, ezinye zeenkcubeko ezihle kakhulu kunye neenkwenkwezi zesitayile e-Afrika ziphume ngendlela eyahlukileyo ebukeka ngayo, ewe, kwabelwane ngayo kwi-Instagram. Igqwetha laseGhana, umgcini weTV, usomashishini, kunye ne-philanthropist, Sandra Ankobiah Uphume enxibe velvet emhlophe ingubo ende emide wayigqiba nge-bejeweled imask yobuso yelaphu oko kungqina ukuba uhlengahlengisa ngononophelo kwimo yesiqhelo.
ENigeria, abaphembeleli bemfashini kunye nosaziwayo babonakala belungele ihlobo njengoko imibala eqaqambileyo yayiyinto yemini. Umyili Tolu Bally wayengaphandle enxibe isinxibo esineentyatyambo eluhlaza atyibilika ngaso IGucci ibhanti G kabini kunye neebhulukhwe zembadada zeBottega Veneta. Ngokujongeka njengaye, kukulungele ukubulala ishishini losuku ukuba uyakhumbula ukugcina ukhuselekile. kwifashoni kunye nesitayile
Ngapha eMzantsi Afrika, amaqondo obushushu sele ehlile, abantu abadumileyo kunye nabaphembeleli bemfashini babonisa umdlalo wabo wokubeka iziqwenga zemozulu ebandayo. Ingcali ye-PR kunye neLorhwebo UZovuyo Zoe Msutwana Usilungiselele njengoko ebeka ingubo emnyama ngaphezulu komnyama nomhlophe ipolka dot ingubo ende enemikhono egqityiweyo ephethe ibhanti yeChristian Dior. Ugqibile ukujonga kwakhe ngombhobho wamachaphaza amachaphaza amdaka kunye neebhutsi ubude, kunye nebhegi efanelekileyo kunye neiglasi zelanga.
Jonga ukuba ii-celebs zase-Afrika kunye neenkwenkwezi zesitayile ziye zatshona njani kule veki iphelileyo kaJuni 2020…
Nhlanhla Nciza Abaphembeleli bemfashini kwi-Instagram
Ivenkile yokunxiba enempahla yefashoni yabasetyhini kwivenkile yethu
Angelo Obasi I-Chioma Ikokwu Kefilwe Mabote Nhlanhla Nciza Nimi Nwofor Sandra Ankobiah Siyanda Dzenga Toke Makinwa Tolu Bally Zoe Msutwana
Uhlobo Rave Juni 22, 2020
IParadise eNtsundu: uBeonconcé uQalisa uLawulo lweShishini abaNini abaMnyama + uMculo omtsha